Home Wararka RW Kheyre “Roobow awood ciidan baan uga reebeyna doorashada”
RW Kheyre “Roobow awood ciidan baan uga reebeyna doorashada”
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa go’aan ku gaartay in Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur awood ciidan looga reebo doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa Muqdisho Online u sheegay in ilaa 500 oo ciidan oo dowladda ay qorsheysay in la geeyo magaalada Baydhabo, ujeedka laga leeyahay ay tahay in lagu hor-istaago Roobow.
“Qorshaha laga leeyahay ciidanka ayaa ah inay qabtaan xarunta doorashada ay ka dhaceyso iyo xaafadaha ku hareereysan oo Roobow laga hor-istaago inuu soo galo, waana ka go’an tahay dowladda” ayuu yiri mas’uul Koonfur Galbeed ka tirsan oo la hadlay Caasimada Online, kaasi oo codsaday inaan la magacaabin.
“Roobow waqti un buu iska luminayaa ee kama qeyb-galayo doorashada” waxaa isna sidaas yiri mas’uul ka tirsan xukuumadda Kheyre oo codsaday inaan la magacaabin.
Previous articleWariye gaariga loogu xiray qarax oo uu dhaawac ka soo gaaray
Next articleKulankii Xil. B. Jubbaland oo kusoo dhamaaday buuq iyo saxan siyaasadeed
Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo Madaafiicdii xalay ku tilmaamay dheemis
Soomaaliya oo talaabo hore u qaaday barnaamijka deyn cafinta